Ninkii Xaas Labaad Raba Wuu Helayaa, Gabadhii Nin Xaas Leh Ku Qanacdana Way Guursan Ee… | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
1991kii ayay ahayd markaan rag culimo ah kala qaybgalay muxaadaro ay dumar u jeedinayeen.
Kolkay muxaadaradii dhameeyeen ayaa su’aalo la weydiiyey, ka dibna Ilaahay wuxuu qadaray inaan su’aalihii qaar ka mid ah ka jawaabay.
Nin aan wax ogayn Allow ha cadaabin baa la yiriye hadalkaygii ayaa waxaa soo dhexgalay in ummadda la badiyo oo guurka lagu dadaalo, ragguna ay xaasaska badiyaan!!. Intii aan hadalka wadey ayaa raggii qaarkood qosleen oo is eeg-eegeen. Aniga Allahay Alle, dareenkuba ima galin.
Markaan meeshiisii kasoo baxnay ayay igula kaftameen adiga iyo duulkaan (dumarka) idiin kala dhamaatay, safaaradaha ayaad kala qaadateen. War maxaa dhacay?. War ma dumarbaa dhinacaas laga maraa?.
Sheekadii intii ayaan ku hilmaamay laakiin waa sidii nimankii sheegeene illaa gabdhihii arrintii meel bay ku guntadeen. Muddo ka dib ayaa gabdhihii qaar ka mid ah yimaadeen magaalo reer ii daganaa, ka dibna qaar ka mid ah ayaa reerkaygii soo raadiyey oo ku yiri: ninkaagu wuxuu aaminsanyahay in afar afar la guursado ee ogow hadda ayaan seddex kale ku daraynaa!.
Arrintii intaas kuma joogsane nin magaalo kale daganaa ayaa ii sheegay in dumarkii aan muxaadarada u jeedinay qayb ka mid ah magaaladooda timid oo ay dumarkii ugu sheekeeyeen inuu jiro nin Axmed C/samad la yiraahdo oo aaminsan in afar afar la guursado!.
Halkaa waxaan ka ogaaday raggii galabtii igu qoslayey inay xog-ogaal ahaayeen oo aan dumarka dhinacaas laga marin, xilligaas ka dibna waan iska ilaaliyey inaan dagaal dambe galo!.
Mar xaflad aroos la isugu yimid magaalada Dimishiq ayaa Xasan Suuri oo makarafoonka igu soo dhaweeyey wuxuu yiri: Sheekh Axmed ayaan u dhiibayaa oo xaasa badan leh, tacadudkana (guurka badan) inagala hadlaya laakiin hadal xafladda u munaasib ah ayaan jeediyey, baddaasna iskuma galin!, dhaqankaas aan qaatayna iigama darin oo dumarka colaadi nama dhextaal.
Gabagabadii ninkii u baahda xaas labaad iwm isagaa raadsanaya, wuuna helayaa siduu ku helaba, gabadhii nin xaas hore leh ku qanacdana way guursan, dumarna talo ka weydiin mayso, ragga iyo dumarkuna waa wada ogyihiin in Ilaahay u banneeyey inay sidaas isu guursadaan; sidaa darteed meesha wax laga doodo ama laga diriro maba yaalaan.